Ukuthengiswa kweDijithali yemali: Into ekufuneka uyazi ukuba uyathenga kwaye uthengise | I-CryptoLog
Ukuthengiswa kweDijithali yemali
Gcina imali kwi-Cryptocurrensets
Ngaba awukathengi i-cryptocurrensets okwangoku? Ewe ngoku lixesha lokuthatha inyathelo ngokulula nangokukhuselekileyo
Bathi xa intengiso iye isiba mbi kwaye amaxabiso ehla, wonke umntu uyaphulukana. Ingaba uqinisekile? Ukurhweba yenye yeendlela ezixhaphakileyo ze yenza inzuzo naphi na apho intengiso ingena khona. Oko kuthetha ukuba nokuba ixabiso liyenyuka okanye liyehla, kwaye sinokulindela umkhombandlela wentshukumo, sinokwenza inzuzo. Ndicinga ukuba kukho imvumelwano sonke esithanda ukuwina, kwaye ii-cryptocurrensets zibonelela ngala mathuba ngokunjalo. Kutheni ungaxabisi nje?
Siza kuchaza ezinye iikhonsepthi ezisisiseko, kwabo bangaqhelananga nokuthengisa, zithini ikhandlela zaseJapan. Ke, iikhonsepthi eziphakathi okanye ezingaphezulu ukufumana iindlela ezintsha okanye ugqibelele ezo sele unazo. Ngaphambi kokuqala, Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ezi zinto zinobungozi obukhulu. Luxanduva lomntu ngamnye, izigqibo ezinokuthathwa. Ingcebiso yam iya kuhlala (kwaye le yeyona nto ibalulekileyo) ukuba "ungcakazo" kwinto engaqondakaliyo ukuba iyintoni. Ngale nto ithethwayo, masiqale!
>> Tyala imali kwii-Cryptocurrensets NGOKU
Isiseko sokurhweba ngeDijithali yemali
Siza kuqala ngokuchaza ezinye zeenkcukacha eziphambili zokwenza ukuThengisa. Lonke uluhlu olukhoyo alupheleli apha, kodwa siza kunika iinkcukacha ngamanqaku aphambili esiwajonga ebalulekile.
Yinto yobuqu, kuba yonke into kwezorhwebo iphelile. Ngaphambi kokumiliselwa kwenye, ehlala ihamba kunye nezibonelelo okanye intengiso, ndihlala ndicebisa ngokufuna izimvo kunye neengcebiso kwi-Intanethi. Iziqinisekiso zokuba kufuneka sijonge ukhetho lwethu ziya kuba:
Umthengisi othembekileyo noqinisekileyo Siza kufaka imali yethu kuyo. Asifuni ukuba neengxaki okanye ukungahambi kakuhle, okanye ngamanye amaxesha ndifunde, abantu abangakhange bakwazi ukurhoxisa imali yabo.
Oko kulawulwa: Kwimeko yeSpain, umzimba ophetheyo wokuqinisekisa ukusebenza kakuhle yi-CNMV, iKhomishini yeNtengiso yeSizwe yoKhuseleko. Kukho abathengisi, abalawulwa kumazwe angaphezu kwelinye, umzekelo Umthengisi weXTB.
Ukubekwa elubala: Ukuba xa sijoyina iwebhusayithi yaleyo siyithandayo, sifumanisa ukuba sinobunzima ekufumaneni ulwazi, ayisiyiyo le nto besiyilindele. Sifuna indawo echaza ngokuchanekileyo iimeko zoRhwebo kunye neeMveliso zalo. Umzekelo, ndisebenza ikakhulu ixesha elide kunye Izinto ezenziwayo ukwenza ukuThengisa. Kwiwebhusayithi yayo, iimeko zemveliso nganye, iindleko kunye neekhomishini, kunye nobungakanani kunye neziqinisekiso abazicelayo zicacile. Yile nto siyifunayo. Kule meko, ii-Activtrades zilawulwa yi FCAIgunya lezemali lase-UK, elisebenza ngaphandle korhulumente wase-UK.
Izimvo zabathengi: Iiforamu, iibhloko kunye namanye amaphepha e-intanethi. Siyalukhathalela uluvo lokuba ngubani osebenze nomntu esicinga ukusebenza naye. Ngaphezulu kwako konke, uvavanyo olunzulu. Kukho abo bathe baneengxaki zokukhupha imali yabo (kwiindawo endaziyo ukuba zinobuzaza), kuba "abazichazanga" ngokuchanekileyo, kwaye batshica kwiindawo ezithile. Ndiyishiya apho…
Zezona ntlobo zixhaphakileyo zetshathi esetyenziswa kurhwebo. Amakhandlela aseJapan asinika ulwazi oluninzi kwakamsinya nje emva kokuba siwabonile. Ekurhwebeni iilwimi, kuqhelekile ukubabiza ngamagama ahlukeneyo ukuze bahlule okanye babhekise kubo. Nokuba leliphi igama elinikiweyo, ulwazi alutshintshi. Ikhandlela lihlala linjalo, ikhandlela. Into ebalulekileyo ngoku kukuba ngamnye kubo, isibonisa indlela elixabiso (icatshulwa) eliye lahlangabezana nayo ngalo lonke ixesha elikhethiweyo. Oko kukuthi, ixesha esisebenza ngalo okanye ukubona igrafu.
Amakhandlela aseJapan abonisa ixabiso, indlela kunye nexesha.
Ikhandlela linokuba yimizuzu eyi-1, imizuzu emi-5, imizuzu eli-15 okanye ukuya kuthi ga kusuku okanye kwinyanga enye. Kwimeko ekubhekiswe kuyo emfanekisweni, ndikhethe amakhandlela ama-1. Inombolo 4 isibonisa ukuba ngela xesha ixabiso lawa nje ukuba ikhandlela liqale ukutsalwa. Umgca okanye i-wick emazantsi yindlela amaxabiso afumaneke ngayo, apho yawela khona ukuya kwinqanaba, ekugqibeleni ukuvala ngaphezulu. Emva kokuba ikhandlela livaliwe (ixesha lidlulile), elilandelayo liqala ukutsalwa, kwaye iyakwenza ngexesha elinye nelinye elingaphambili, elikhethiweyo.
Ikhandlela 2 livulwe kwakwindawo enye evaliweyo 1. Kungenxa yokuba ibikukuqhubekeka. Apha ixabiso liyehla, emva koko lenyuka kakhulu kwaye lawa kancinci ekugqibeleni. Ikhandlela 2 yayilikhandlela apho amaxabiso anyuka khona. Ekuqaleni kuyinto eqhelekileyo ukuba kunzima ukubona ulwazi oluninzi ngokulujonga nje, kodwa uyiqhela, iphantse ikhawuleze kunokufunda. Okokugqibela, ndiye ndadwelisa u-3 no-4. Kule meko sinento edla ngokubizwa ngokuba yi "hammer candle". Ixabiso liyenyuka okanye liwe ukuze ekugqibeleni ujike kwelinye icala kwaye usishiyele amakhandlela anemizimba emincinci kunye nemisonto emikhulu. Ndithathe ikhandlela le-4, ukukubonisa kwisimo esincinci esincinci, ukuba kwenzeke ntoni kanye kanye, kwaye uqonde ukuba kutheni elo khandlela.
Inani lee-Cryptocurrensets zorhwebo kunye
Lumka kubungakanani esithengayo! Anditsho ukuba ndizikhusele okanye ndilumke, kodwa kuya kufuneka unike ingqalelo. Ngokwesiqhelo siza kuthengisa ngeemali zedijithali sisebenzisa iiCFDs ezaziwayo (izivumelwano zomahluko). Oko kuthetha ukuba umthengisi (umrhwebi) uya kuhlawula umthengi (kuthi) umahluko phakathi kwexabiso lokuqala nelokugqibela lomsebenzi ngamnye. Xa sithetha nje, ukuba sithenga i-1 Bitcoin nge-3500 3600 yeedola, kwaye sicinga ukuyithengisa xa ixabisa i-100, kufuneka basibhatalele iidola ezili-XNUMX. Ukuza kuthi ga ngoku kulungile.
Ingxaki yile Kufuneka sibale ukuba malingakanani inani ekufuneka silithengile. Ii-CFDs zizivumelwano, kwaye iiasethi ezingaphantsi kwesiqhelo zihlala zingayi ngqo ngqo kwiyunithi enye, ngaphandle kokuba kuyabiza, umzekelo iBitcoin uqobo. Masibone imizekelo embalwa:
Ityala lokuqala. Sifuna ukuthenga iBitcoin. Umrhwebi usixelela ukuba iqashiso ngalinye leBitcoin CFDs lenziwe nge-1 Bitcoin. Sithenga amaqashiso ayi-0. Ukuba i-Bitcoin yayikwi-1 ngelo xesha, siya kuthenga isishumi esinye. $ 3600 x 3600 = $ 0,1. Oko kukuthi, ukuba ixabiso elidwelisiweyo liye lenyuka okanye lehla nge-360 yeedola, siza kufumana i-400 yeedola okanye siyilahle.
Ityala lesibini. Sifuna ukuthengisa ii-Ethereums kuba sicinga ukuba ixabiso liza kuwela. Umthengisi usixelela ukuba iqashiso ngalinye le-Ethereum CFD lenziwe nge-10 Ethereums. Thina, abaphumeleleyo ngokunyuka kwethu kwiBitcoin kwaye iidola ezingama-40 zabonakala zincinci kuthi, sagqiba kwelokuba sithengise ngakumbi, kodwa nge-Ethereums. Kungenxa yokuba ukuba ngoku ithengisa nge-120 yeedola, ukuba yehla i-10 yeedola sicinga ukuba izakusinika isibonelelo esincinci. Siza kuthengisa amaqashiso ali-10 (kwaye le yimpazamo eqhelekileyo). Ukuba sithengisa amaqashiso ali-10 e-Ethereum, apho i-CFD nganye yenziwe nge-10 ye-Ethereums, iya kuba zizonke ze-Ethereums eziyi-100 (i-10 ye-CFD nganye nganye ine-Ethereum ezili-10). Ke ... 10 amaqashiso x 10 Ethereums x $ 120 yexabiso = $ 12.000 !! Ukuba amaxabiso aphakama endaweni yokuwa, siya kulahleka. Idola nganye xa ixabiso lenyuka, singaphulukana ne- $ 100.
Yenzelwe oko Gxininisa ukuba kufuneka ucace malunga nezinto ozithengayo, kwaye ungakanani. Ukuba izinto zihambe kakuhle, sathenga ngaphezulu, uvuyo esiluthatha nathi. Kodwa kungcono siphephe ezoyikiso, xa kunokwenzeka zingahambi kakuhle.
Iindidi zeeOrder Orders
Imiyalelo yokuthengisa zisinceda ukuba silawule ngcono ukusebenza kwethu. Amaxesha ngamaxesha, indlela yethu yokunxibelelana nemarike iya kwahluka ngokuxhomekeke kwiinjongo zethu. Ngesi sizathu, siza kushwankathela ezona ziqhelekileyo nezisetyenzisiweyo.
Iwindow ehambelana neqonga lam kwi-Activtrades. Nawuphi na omnye umrhwebi uya kuba nemisebenzi efanayo.
Iiodolo eziphuma kwintengiso
Ukuthengisa: Ukuphelelwa ngumonde, okanye kungenxa yokuba umzuzu usixelela ukuba masithenge. Nje ukuba ukuthengwa okanye ukuthengiswa kweodolo kusungulwe, kuya kwenziwa ngexabiso elicatshulweyo apho kulapho ngalo mzuzu.
Thenga umda: Sicinga ukuba sine-Ripple kwi-0,3324 kwaye sifumene inkxaso, okanye sikholelwa ukuba ixabiso aliyi kuwa ngaphezulu kwenqaku elithile, umzekelo 0. Xa ufaka iodolo, ayizukuqhutywa, kodwa iya kuhlala ikwimowudi yokulinda. Ukuba "sikhupha unxibelelwano", kuba siza kulala, sisebenze, okanye nantoni na, xa kunokwenzeka ukuba iRipple iwe kwaye ifike ku-31'0 okanye ngaphantsi, umrhwebi uphumeza iodolo.
Thengisa umda: Kuyafana, kodwa kubuyela umva kuneMida yokuThenga. Sifuna ukuthengisa nge-0'34, kwaye i-Ripple, ikwi-0'3324, singena kwi-odolo. Ngokukhawuleza ukuba i-Ripple ifike kwi-0'34 i-odolo yethu yokuthengisa iya kwenziwa, nokuba sidityanisiwe nomthengisi okanye akunjalo.
Thenga Ukumisa: Sifuna ukuthenga, iRipple ikwi-0'3324. Siyakholelwa ukuba xa kuphuma iindaba eziza kukunceda, okanye silindele inyathelo elomeleleyo kuba uhlalutyo lwethu lobuchwephesha luthelekelela njalo, njl.njl. Okwangoku, kusecaleni, kwaye asiqinisekanga. Ukumisa ukuthenga kusinceda ukumakisha i-oda yokuthenga ukuba ixabiso lifikelela kwinqanaba eliphezulu kuneli langoku, umzekelo, 0'3380. Xa isicatshulwa sifika apho, i-odolo yethu yokuthenga iya kwenziwa.
Thengisa Ukumisa: Kuyafana ne-Stop Stop, kodwa ngasemva, iyathengiswa. Ukuba ixabiso lifikelela kwinqanaba elisezantsi kuneli-0,3324 yangoku kwaye sifuna ukubeka iodolo yokuthengisa ebangela ukuba nje ukuba ifike kwinqanaba esichazayo.
Imiyalelo ngaphakathi kwintengiso
Ukuthengisa: Ngomsebenzi wethu owenziweyo, ngaxa lithile kufuneka siwuvale. Ukuthengisa kwintengiso yeyona ndlela yokuvala ukusebenza kwangoko, kwaye iya kuhlala isenziwa ngexabiso elilelo xesha.
Misa ilahleko kwaye uthathe inzuzo: Singaphakathi kokusebenza, kodwa asazi ukuba ixabiso liza kwehla okanye lenyuke kakhulu. Nokuba siyathenga okanye siyathengisa, sinokumakisha i-Stop Loss okanye Thatha iNzuzo, ukumisa ilahleko okanye ukufumana inzuzo kwaye sivale umsebenzi ngaphandle kokuqhagamshelwa.
Ukuqonda iMakethi ye-Cryptocurrency Market
Ukufunda ukuchonga iintsingiselo kuya kusinceda siqonde okwenzekayo
Ukuba sifuna ukwenza urhwebo olufanelekileyo, kubalulekile ukuqonda ukuba sikuphi kwintengiso. Ukwenza oku, eyona ndlela ilungileyo yile Khangela ukuba yeyiphi imarike eya kuyo. Inezigaba ezi-4. Kwimeko ehlalutyiweyo, imeko yayo esezantsi inokuchongwa, emva koko ibe yindawo yokuqokelela, ilandelwe yinyuko ephezulu, kwaye iphele kwindawo yokuhambisa. Ukuba iqhubekile nokutshata, oku kulandelayo kuya kuba sisiqhelo esisezantsi. Eyona ndlela yokuchonga kuzo zonke zezona ziphezulu kunye neyona mininzi iphuhlisiweyo.
Enye into ebalulekileyo necetyiswayo yile phawula «amanqanaba» apho ixabiso lijikile khona. Zihlala zibizwa Iindawo zokumelana (ukuba ixabiso lenyuka kwaye xa lichukumisiwe libuyela ekwehliseni), okanye Imimandla yenkxaso (ukuba ixabiso liyehla kwaye xa lichukumisiwe liyenyuka). Kule meko, ndiphawule zonke iindawo eziphakamileyo kunye nezisezantsi kwendlela yokuqala esinokuthi siyichonge. Imigca ethe tyaba ngamanqanaba apho ixabiso litshintshe kwicala. La manqanaba kwikamva, kwaye kuxhomekeke kwisicwangciso-qhinga sethu, "siyathemba" ukuba banokusebenza njengamanqaku awomeleleyo otshintsho kwicala lesalathiso sexabiso.
Emva koko, ndibonisa ukuvela kwezinto ezazinokwenzeka kwixesha elizayo emva kwala manqanaba. Kumfanekiso wokuqala, ndiphawule imijikelo emhlophe njengomzekelo, ukufumanisa ukuba kutheni la manqanaba ebalulekile. Andiphawulanga onke amanqaku, ukuze ungalayishi umfanekiso kakhulu. Ngoku kweyesibini, siza kubona ukuba bekuya kwenzeka ntoni ukuba besishiya loo manqanaba kwikamva. Kwimeko apho unomdla, unokufumana le mizobo kwi Ukuthengisa.
Inqanaba elitsalwe kakuhle kufuneka lichonge amanqaku okujika kwixabiso
Kule grafu sinokubona ukuba umgca we-3 omdala (inqanaba) uqhubeke njani nokubaluleka kwiinyanga kamva. Ngapha koko, ekupheleni kukaJulayi 2018, yayiyeyona ndawo ibalulekileyo yokuguqula ixabiso, ndenza njengoKuchasa. Kwelinye icala, inqanaba leorenji eliqale lasebenza "ngandlela thile", likwenza kucace ukubaluleka kweli nqanaba kwixa elizayo, nelisebenza njengeNkxaso kunye noXhathiso.
Iindlela zokurhweba ngeDijithali yemali
Kukho amacebo amaninzi kwimarike ye-Cryptocurrency. Ukusuka kwiipateni zesibane, kwiindlela, kunye nezalathi, njl. Kuxhomekeka kubuntu bomntu ngamnye, njengabarhwebi kufuneka sihlale sijonga okunxulumene kakhulu okanye okufanelekileyo kuthi. Emva koko, siza kunika umzekelo ngesibonisi se-RSI. Yeyona yaziwa kakhulu kwaye isetyenziswa kakhulu, kuba kulula ukuyitolika. I-RSI sisalathiso esincomekayo esixelelayo, sithathela ingqalelo iifomula ezithile, ukuba ixabiso lithengwe kakhulu okanye lithengisiwe. Ukwenza oku, kusetyenziswa isikali ukusuka ku-0 ukuya ku-100. Ngokuchasene noko, ukusondela kwi-0, kokukhona ixabisa ngaphezulu (iyabiza).
Umzekelo wokurhweba kunye nokulindela nge-Oscillating RSI Indicator
Kulo mfanekiso wesithathu, siyayibona i-RSI emazantsi. Sithintekile yindlela elixabiso elibonakala linyuka lisihla ngayo phakathi kwemigca emibini ebomvu, kwaye ngamanye amaxesha iyaphuma. La manqanaba amele amanqaku angama-70 nama-30 kwali-100, esixoxe ngawo kumhlathi odlulileyo. Ukusuka apha, enye indlela yokusebenzisa i-RSI kukuthenga xa isixelela ukuba ixabiso "litshiphu", okanye ukuthengisa xa lisitshela ukuba "liyabiza."
Ukuthathela ingqalelo yonke into esiyifundileyo apha ngasentla, sinokwenza udibaniso phakathi kwamanqanaba + amaNqanaba + eRSI. Kule meko, ukusebenza kokuqala ngekhe kube yimpumelelo, ngelixa ezinye ezimbini bekuya kuba njalo. Ixesha elingaphezulu, kunye nokufunda ukubeka ii-oda zokuthenga / zokuthengisa, zokumisa, njl.njl. Ukuziqhelanisa kunye namava sisidanga.
Qaphela ukuba oko akuthethi ukuba le ndlela iya kuhlala isebenza, kwaye ayinakuphikiswa. Ngaphezu koko, nangaliphi na ixesha sifunda, okanye siza nesicwangciso esitsha, kufuneka siyihlolisise ngokungqongqo ukubona ukuba iyasebenza na. Sifaka imali yethu emngciphekweni, abantu abaninzi bayaphumelela, kodwa baninzi abalahlekayo. Asinakuthabatheka kukuvela kokuqala. Ukwazi ukuba isicwangciso silungile okanye akunjalo, kuhlala kufuneka senziwe uVavanyo oluya ngasemva.
Ukurhweba ngasemva kwe-Cryptocurrency
Ukubuyela umva okanye ukubuyela umva yenye yezona ndlela zinamandla zokulawula imeko yethu kurhwebo. Eyona nto iphambili kuyo kukujonga ukuba ubuchule, okanye iphatheni lesibane, okanye iintshukumo esikholelwa ukuba zingasizisela izibonelelo, zisebenzile ngaphambili. Ngokwenza umva kakhulu, siya kuba nakho ukufumanisa ukuba isicwangciso-qhinga sethu siza kusebenza ngokwenene kwixa elizayo.
Ayisiyo isiqinisekiso esigqibeleleyo, kodwa ngokweemvakalelo iyasinceda kwizigqibo zethu. Ngamanye amaxesha, kuya kubonakala ngathi kufanele ukuba sisebenzise imali yedijithali okanye hayi, kuxhomekeke kwinto esivakalelwa ngayo ngalo mzuzu. Ngomva owenziwe mva, into esiyenzayo ukubeka isicwangciso ekusebenzeni xa umzuzu ofanelekileyo usenzeka, ngaphandle kokungena kwiingxoxo zangaphakathi okanye izigqibo zemvakalelo.
Siyathemba ukuba eli nqaku likukhonze njengereferensi yokufunda ukuba ilizwe leNtengiso ye-Cryptocurrency linokuba njani. Le yinxalenye encinci yendlela enkulu ngayo. Khumbula, ngaphambi kokungena kulo naliphi na inyathelo okanye isenzo, ekugqibeleni luxanduva lwakho ukuba uzilungiselele ngokwaneleyo. Ukuba uyaqhubeka, sininqwenelela impumelelo kunye nempumelelo. Intengiso elungileyo ye-crypto!
1 Gcina imali kwi-Cryptocurrensets
2 Isiseko sokurhweba ngeDijithali yemali
2.1 Ukukhethwa kweBroker
2.2 Amakhandlela aseJapan
2.3 Inani lee-Cryptocurrensets zorhwebo kunye
2.4 Iindidi zeeOrder Orders
2.4.1 Iiodolo eziphuma kwintengiso
2.4.2 Imiyalelo ngaphakathi kwintengiso
3 Ukuqonda iMakethi ye-Cryptocurrency Market
4 Iindlela zokurhweba ngeDijithali yemali
5 Ukurhweba ngasemva kwe-Cryptocurrency